Tarsan oo Ra’iisal Wasaaraha kaga digay in lagu dirqiyo liiska magacyada ee Golaha Wasiirada - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ahaana Duqii Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu ka hadlay arrinta ku aadan magacaabidda Golaha Wasiirada.
Tarsan, ayaa wuxuu Ra’iisal Wasaaraha uu ugu baaqay inaanay beelaha ku soo khasbi shakhsigii uu soo magacaabi lahaa, si aanu hadhow ugu andacoon in lagu soo dirqiyay.
“Inuu qofka soo xusho, qabiilada boosas ayeey leeyihiin, Odayaasha qabaa’ilada Ra’iisal Wasaaraha ma khasbi karaan, marka Ra’iisal Wasaaraha waxaan lee yahay haka fiirsado qofka uu soo xulanaayo hadhoow ka saari mayso waa laygu khasbay qofkaan ama qofbaa ii keenay.”
Tarsan, ayaa Ra’iisal Wasaaraha ku bogaadiyay in uu soo xushay Madaxweynihii dalka, oo ay soo xusheen shacbiga Somaliyeed, sidaasi daraadeed wuxuu ugu baaqay in uu ka fiirsado Golaha Wasiirada.
“Qof kale oo afdheer Ra’iisal Wasaaraha kuma khasbi karo qof aan waxba qaban karin ama masuuliyad u qaadi karin shacabka Soomaaliyeed. Umadaan Madaxweynaha ayay masuuliyadda saaratay, Madaxweynahana adiga ayuu masuuliyada kuu dhiibay.”
DAAWO: R/W Cumar CC Sharma’arke oo kufay + niyad jab xoog leh oo heysta